नेपालकै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, जसलाई राज्यले सधै बिर्सियो ! - VOICE OF NEPAL
नेपालकै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, जसलाई राज्यले सधै बिर्सियो !
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १५:०९ 172 ??? ???????
– रमा खड्का
आजभन्दा १०४ वर्ष पहिले सुदूरपश्चिमको डोटीमा पर्ने जैनौली गाउँमा द्वारिकादेवी ठकुरानीको जन्म भएको थियो ।
बुवा खरिदार वामदेव पन्त र आमा राधिका पन्तको कोखबाट उहाँको जन्म भएको हो । शिक्षित र समाजसेवी परिवारमा उहाँको जन्म भएकाले समाज सेवा र राजनीतिमा लाग्न उहाँलाई कुनै रोकतोक थिएन । घरपरिवारबाटै उहाँको राजनैतिक यात्रा सुरु भएको थियो । अहिले पनि छोरीलाई शिक्षा दिन अनाकानी गर्ने समाजमा उहाँका बुबाले बनारसबाट घरमै पण्डित बोलाएर शिक्षा दिनु भएको थियो ।
२०१५ सालमा आम चुनाव हुने भयो, त्यतिबेलाको डडेल्धुरा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ६६ मा नेपाली कांगे्रसले द्वारिकादेवीलाई उम्मेद्वार बनायो र उहाँको शानदार जित भयो । जहाँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवार र कांगे्रसबाटै उठेका बागी उम्मेदवारहरुको धरौटी नै जफत भएको थियो । त्यति बेला कांगे्रसले दुईतिहाइ बहुमत पायो, विपी कोइराला पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभयो । नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । त्यसपछि विपी कोइरालाले द्वारिकादेवीलाई स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन्, भने संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन् । जुन नेपालको इतिहासकै ठूलो फड्को हो । महिलाको नाममा गठन गरिने विभिन्न सञ्जाल समूह, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुरुवात गर्ने अग्रजहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस्ता कुराहरुलाई अहिले पनि स्मरण गरिरहनु आवश्यक छ ।
अहिले पार्टी र राज्यले यस्ता महिलाहरुलाई बिर्सिइँदै गइएको छ । तर उहाँहरुकै कारण आज देशमा महिला सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वले विस्तारै पूर्णता पाउँदैछ । यो कुरा पनि सबैलाई स्मरण होस् ।
BREAKING: रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रिहा